IiVithamini kubasetyhini ukuphucula isikhumba
Kwinqaku lethu elithi "IiVithamini zaBasetyhini kuPhuculo loKhuseleko" siya kukuxelela ukuba ziphi iivithamini ezifunekayo ukuphucula isikhumba. Ukuthukuthela, ukuvuvukala, ukuguga kwangaphambili, ukutshatyalaliswa, ukuxubusha kunye nokumelela - oku kunokubangelwa ukungabikho kokutya kwezinto kunye namavithamini. Ukukrazula iingxaki ezinjalo, kufuneka uguqule ukutya, udibanise kwimveliso yokutya okudityanisiweyo yesikhumba sethu, kufuneka ulungise unyango olungalunganga. Kubaluleke ngaphezu kweminye imizuzu emihlanu inqabileyo "yokulimaza" impilo kunye nolutsha.
Ukuchazela iimveliso ezingavumelekanga . Kuyimfuneko ukukhuphela iindondolozo, imibala engumgubo, ukutya okuqulethe amaninzi amanqatha, okubukhali kunye nokutya okunomsoco. Nama-peaches amathanga, ingqolowa, i-peas, iipinapali, utamatisi ocoliweyo, ukhukhamba, ziintshaba eziyingozi zobungqina bethu nolutsha.
Ukucwina kunye nokuxubusha kudla ngokufumaneka kwiidlo eziphantsi. Ukungabikho kweoli kunomthwalo wokunyanzeliswa kunye nokunyaniseka kwesikhumba, kuthintela ukutshatyalaliswa kwe-vitamin A. Ukuba umzimba unqatshelwe le vithamini, nokuba ilanga lasemvula alinakukukholisa ulusu, luya kukhula kuphela. Ngempembelelo ye-ultraviolet inceda ukujamelana ne-vitamin A. Imithombo ye-vitamin A yonke imifuno ye-orange kunye neziqhamo. Kwiimeko ezinzima ze-ambulensi, ungathenga ukhilimu onomsoco kunye nomxholo we-vitamin A. Isiphumo esisisigxina nesigxina sinokufezekiswa ngokutya okunokulinganisela nokuqhelekileyo.
Ukuguga kwangaphambili. Ngokutsho kophando lwe-cosmetologists kunye noogqirha ngenxa yezinto ezinomsoco kunye nensimbi enzima, isikhumba sibhekana nokuguga ngokukhawuleza. Ngokwenene, baxhaswa ngama-antioxidants. Ezi ziquka amavithamini A, E, C, kunye nePP. IiVithamini zikhuselekile kwingozi, ezisetyenziswa ngendalo, ukhusela ulusu.
Iivithamini kubasetyhini ukuphucula isikhumba kwi-oxidation kunye nokusuka
Bakwandisa ukuchasana nemisebe ye-ultraviolet. Imithombo ephambili yileta eluhlaza, ubusi, i-watermelon, amajikijolo, i-pepper yaseBulgaria, iolive, utamatisi, iilki, isaladi eluhlaza, i-broccoli.
Isilungiso esihle sokuguga kusengaphambili asikho nje i-antioxidants, kodwa i-adsorbents. Ezi zivuno ezahlukeneyo, ukutya okunotye kwifiber. I-Fiber isusa i-slag eqoqwe emathunjini. Emva koko i-toxin iyalala, ulusu luba luhle kakhulu. Kodwa kufuneka uqaphele, kuba ubuninzi befiber bungabangela ukuphazamiseka kwesisu. Imithombo ephambili yintlahlela, imifuno, okusanhlamvu, i-bran, ngokukodwa ezo ezingekho phantsi kokunyanga.
Ukuvuvukala kunye nemibimbi
Mhlawumbi awunayo i-polyunsaturated eyamafutha acids okwaneleyo. La mafutha, ukwandisa ukunyaniseka kwesikhumba, inikeze imisebenzi yokukhusela yesikhumba kwaye ibambe indima ebalulekileyo kwinkqubo ye-metabolism ye-fat. Zizo ezi zi-acid acids ezifaka isandla kwi-extraction of fat and the fact that it burns in the process of energy metabolism. I-Polyunsaturated fatty acids inefuthe lexate kunye ne-choleretic, ukunciphisa i-blood clotting. Kwaye negalelo ekwenzeni ukuba izinga le-cholesterol egazini linciphisa.
Imithombo ephambili i-herring, i-trout, i-mackerel, ityhuna, i-salmon, i-walnut, i-hazelnut, i-almonds, imbewu ye-pumpkin, i-sesame kunye neoli yemifuno. Ukungabikho kwe-vitamin C kunokuchaphazela ukubonakala kwangaphambili kwemibimbi. Le vithamini idlulisa imibala emancinci ebonakalayo, ivimbela ukubunjwa kwama-wrinkles aphantsi. Kodwa kufuneka uqaphele ukuba xa upheka kwisitya esivulekileyo, kunye nokunyanga kwexesha lokushushu, i-vitamin C iyatshatyalaliswa, ngoko kuyacetyiswa ukuba udle izithelo ezimanzi nezitsha, iindizi ezinomatshini kunye nemifuno emnandi.
Umbala ogqithisileyo kunye nesibhakabhaka
I-vitamin H-biotin ilwa nabo. Kubaluleke kakhulu kumbala omhle, ukugcina isikhumba sempilweni. Imithombo yevithamini H yi-imbiliso ye-brewer, ubisi, i-yolk yolk, isibindi, iisuthi.
Ukusila kunye namanxeba
Kutheni iilonda ziphilisa kakubi kwaye zivela? Mhlawumbi, asinayo imveliso eyaneleyo enezityebi kwiprotheni. Umthombo oyintloko: urkey, inkukhu, intlanzi. Banika umzimba wethu ngama-amino acids kunye nama-proteins, okufunekayo ukuhlaziywa kwesikhumba. Umthombo onokwenzeka weengxaki uya kuba ukungabikho kwee-enzyme kunye ne-enzyme emzimbeni. Ngombulelo, izicubu zibuyiselwa, amandla akhiwa, ngaphandle kweenzyme emzimbeni akukho nto isebenzayo. Kodwa ngokuqinisekileyo sonke asikhoyo le milekyulo ebalulekileyo yamaprotheni. Imiqathango engendawo yokusingqongileyo, utywala, i-caffeine, uxinzelelo oluqhubekayo lubi kakhulu kwi-enzymes emzimbeni. Ngenxa yokungabikho kwee-enzyme, ukuguga kubonakala ngakumbi, ulusu lubuyiselwe kakhulu, izifo zenzeka ngokuphindaphindiweyo, iinkqubo zomzimba zinciphisa kakhulu. Ngokutya okucatshulwa ngomoya, akukho zenzululwazi. Umthombo oyintloko kukutya okuluhlaza.
Ngokuqhelekileyo imbangela yobomvu ibukhali, ukutya okuthosiweyo, ukutya okungafaniyo. Ukuba isikhumba sakho sifudumele kwaye sisoloko sibomvu, ke singabandakanyi kwiwayini lakho lokutya, i-sausage, i-hams, inyama yokubhema. Ezi mveliso zinceda ukwandisa uxinzelelo kwaye ube nempembelelo embi kwibala.
Ukubonakala kwazo kudla ngokudibaniswa nokungabikho kwe-vitamin C. Le vitamin iyadingeka ekuveliseni i-collagen, ibonelela ngokuqhelekileyo kwesikhumba. Ukuba isikhumba asikho i-vitamin C, ulusu luba lukhuni, ukubola kwamanzi, okubizwa ngokuba "iinkwenkwezi", kunokwenzeka lula. Enye yemithombo ephezulu yobuhle yi-vitamin C, kwaye njengomthetho akwanele ekupheleni kwebusika nasekuseni kwentwasahlobo.
Ngoku siyazi ukuba yeyiphi iivithamini ezifunekayo kubasetyhini ukuphucula isikhumba. Uku landela ezi ngcebiso, kufuneka uhlaziye ukutya kwakho kwaye ungeze ezo mveliso eziza kulukhumba.
NgoDisemba omnandi: iimveliso ezintsha zokunakekelwa komzimba ezisuka e-L'Occitane kunye noPerre Herme
Ukuhlanjululwa kwesikhumba ekhaya nasebuhle be-salon
Ukuziphatha kobudlelwane bezoshishino phakathi kwendoda nomfazi
Igama likaRose: Le Parfum Rose Couture e-Elie Saab
Isaladi ye-avovoc ne-bacon
Ukunyanga i-acne ekhaya
Gcina kwi-ash ash
I-Thick - okanye inhle?
Yintoni enokuyenza xa umhlobo waba ngumthwalo kuwe
Indlela yokugcina imali kwimpilo yemihla ngemihla
Yintoni edibeneyo yohlobo lwe-hyperandrogenism?